Hal-abuure ka qayliyay xarun Hargeysa ku taal oo dhaqano cusub lagu faafiyo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Hal-abuure jooge magaalada Hargeysa,ayaa ka qayliyay xarun loo bixiyay dhaqanka oo habeen looga hadlaayaa caadada dumarka. Maaha dhaqan Somaliyeed iyo mid Muslim in laga hadlo abuurta RABI sida caadada oo kale, waxase uu weliba raaciyay in xarunta lagu casuumay naag khaniisad ah oo dumarka ka dalbatey inay is guursadaan.
Waxa hore Hargeysa loogu soo dhaweeyay khaniis weyn oo weliba isla sawirey hablaha magaalada Hargeysa oo iyagu markii dambe ogaadey. ” Muuse Biixi waxa loo fadhiyaa in diintii iyo dhaqankii uu u dhaartey difaaco ayuu yiri hal-abuure Yuusuf Shaacir.
Waxase xusid mudan in barnaamijkaa hal-abuurku ka hadlayo kaliya laga jawaabi karo marka la daawado, ayse muhiim tahay in gabdhaha Somaliyeed u baahneyn cashar sidaasa ee naagaha gaalada ee nijaasta ah u baahan yihiin.